प्रधानमन्त्रीको उपचार सकियो, शुक्रबार फर्कंदै
प्रधानमन्त्रीको उपचार सकियो, शुक्रबार फर्कंदै
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य उपचार बुधबार पूरा भएको छ । सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा १२ दिनको नियमित स्वास्थ्य उपचार पूरा भएको प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्माले नयाँ पत्रिकालाई बताए । उपचार सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शुक्रबार थाई एयरवेजको नियमित उडानबाट दिउँसो साढे १२ बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
५ भदौमा उपचारको सिलसिलामा सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीको ६ गतेदेखि प्लाज्मा फेरेसिस सुरु भएको थियो । यो मिर्गौलाको एन्टिबडी हटाउने विधि हो । प्लाज्मा फेरेसिस सात चरणसम्म गरिन्छ । बुधबार सातौँ चरण पूरा भएसँगै उपचार सकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थामा अनुकूल सुधार भएपछि उनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र निजी चिकित्सक डा. दिलीप शर्मा बुधबार स्वदेश फर्किएका छन् । रिमाल र शर्मा फर्किएलगत्तै नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सिंगापुर पुगेका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह भने मंगलबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । पौडेल र गौतम प्रधानमन्त्री ओलीसँगै शुक्रबार फर्किनेछन् ।